हाम्रो प्रिय जय नेपाललाई तिम्रो स्टालिनको लालसलाम चाहिँदैन् ! « Nepal Bahas
प्रकाशित मिति : २९ बैशाख २०७६, आईतवार १८:३३
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले आफूहरुले शुक्रराज शास्त्रीले बोलेको जय नेपाललाई बोकेर हिँडिरहेको स्पष्ट पारेका छन् ।
सरकार र संस्कारका बीचमा शब्दमा धेरै भिन्नता नरहेको स्पष्ट पार्दै उनले भने,‘तर, प्रवृत्तिमा धेरै भिन्नता छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदमा बोलेको कुरा यो देशको पहिलो पटक सभामुखको आदेशमा प्रधानमन्त्रीले बोलेको भाषा असंसदीय भयो भनेर संसदीय रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने दिन आयो ।
हुँदाहुँदा प्रधानमन्त्रीजीको जुन प्रकारको शैली छ, अलि बिग्रेको बिग्रेको टाईपको फोटोकपी शैलीमा मन्त्रीहरुले पनि बोल्न थाले । शर्माले जय नेपाल भन्ने शब्द सबैभन्दा पहिले यो देशमा शहिद शुक्रराज शास्त्रीले भनेको पनि सुनाए ।
शास्त्रीलाई फाँसीमा झुण्ड्याउनु अघि राणाहरुले तिम्रो अन्तिम ईच्छा के छ ? भनेर सोधेको र त्यसको जवाफमा शास्त्रीले –जय नेपाल भनेको सुनाउँदै शर्माले थपे,‘फेरि पनि राणाहरुले होईन, तिम्रो अन्तिम ईच्छा के छ भनेर सोधे ।
शुक्रराजले जुरुक्क उठेर भने–जय नेपाल । हो, त्यही जय नेपाल बोकेर कांग्रेस हिँडिरहेको छ ।’ कांग्रेसको जय नेपाल भन्ने शब्दलाई अपमान गरेकोमा उनले आक्रोश पोखे ।
उनले भने,‘हामी जय नेपाल गुन्जाउँछौं । हामी खुशीका साथ भन्छौं । हाम्रो प्रिय जय नेपाललाई तिम्रो स्टालिनको लालसलाम चाहिँदैन् ।’
#Bishwo prakash sharma